Ọnụọgụ 3 na Çorlu Train Disaster Case | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara59 CorluNtị 3 na Ọnọdụ Ọdachi Çorlu
10 / 12 / 2019 59 Corlu, 59 Tekirdag, Usoro okporo ụzọ okporo ụzọ, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey
corlu train ọdachi ikpe na ntị nke atọ
Ntị 3 na Çorlu train train; Mpaghara Çorlu nke Tekirdağ, ndị 25 nwụrụ, ndị 328 merụrụ ahụ n'ihe mberede ụgbọ oloko 3'inci malitere.
Istanbul si Uzunköprü district nke Edirne HalkalıNdị njem njem 362 na ndị ọrụ 6 na-azụ, na -aga na-aga 8 July 2018'de Corlu district nke Tekirdag nke dị nso na Sarılar Neighborhood mebiri emebi. Umu 7, ndi mmadu 25 gbuchara ndi mmadu 328 meruru ahu.
Onye isi oche mpaghara TCDD 1, nke a chọpụtara na ọ bụ nnukwu ntụpọ n'ihe ọghọm nke thelọ Ọrụ Ọhaneze Çorlu Chief. Halkalı Turgut Kurt, onye jere ozi dị ka onye na-elekọta ụlọ okporo ígwè okporo ígwè na 14 Second Maintenance Directorate, Çerkezköy Özkan Polat, Onye na-ahụ maka idozi ma na-arụzi ya bụ Onye Isi na Nlekọta Roadzọ Mịnịstrị, Celaleddin Çabuk, onye na-arụ ọrụ dị ka Line Mmezi na Mmezi Nlekọta Roadlọ Ọrụ, na Çetin Yıldırım, mbinye aka nke Bridges Chief, Çetin Yıldırım, onye bịanyere aka na nchoputa nyocha ọha na-eme kwa afọ na May. A gbara akwụkwọ Çorlu 2'inci ikpe dị egwu maka ịchọrọ mkpọrọ site na 15 kwa afọ ruo afọ 1'er.
Nmekorita nke mbu
Ikpe a bidoro na July na Courtorlu Court of Justice na Justicelọ Mgbakọ 3, bụ nke emere dịka thelọ Mkpebi Ebube nke 1. Agbanyeghị, ụfọdụ ndị ikwu na ndị merụrụ ahụ nwụrụ, ekweghị ka eburu n'uche na ụlọ adịghị n'ụlọ nzukọ ahụ. Mgbe ihe omume ndị ahụ gasịrị, a kpọgara ntị ahụ na 130 July Hall na ndị 600 na Çorlu Educationlọ Akwụkwọ Ọhaneze na Çorlu Çoban Çeşme Neighborhood Bülent Ecevit Boulevard.
Taa, tupu a na-anụ 3, ndị uwe ojii were ọtụtụ nchekwa. E wetara ndị otu ndị uwe ojii si mpaghara etiti Tekirdag nkwado. A rụnyere X-Ray ihe n'ọnụ ụzọ Educationlọ Akwụkwọ Ọzụzụ Ndị Ozi. Emepụtara ihe ntinye iche iche maka ndị ọka iwu, ndị o metụtara, ndị na-ekiri ya na ndị otu akụkọ. N'ime ụlọ ngere, a na-achọ ma na-akpọrọ ndị na-ege ntị.
'ANY J chọrọ ikpe ziri ezi'
Ndị ikwu nke ndị ahụ nwụrụ na ndị merụrụ ahụ n'ihe ọghọm ahụ, ikpe ahụ, Çorlu Public Education Center gbakọtara na anya dị ihe dị ka kilomita 1, na-eje ije, bịara. Ezinaụlọ nwere foto nke ndị nwụrụ n'aka ha, '' ikike, ikpe nkwụmọtọ ',' igbu mmadụ na mberede, 'tụpụrụ aha mmadụ.
Zihra Bilgin, onye nwa ya nwanyị Bihter Bilgin nwụrụ, nwanne ya nwanyị Emel Duman na Derya Kurtuluş kwuru, “Taa bụ ụbọchị 520. Na-atụ anya ikpe ziri ezi maka ụbọchị 520. Ọ nweghị onye ọ bụla chebere. Onye obula no n’onodu nlegha anya a, site n’onye dicha ala rue ala kachasi elu. Ọ bụrụ na minista na-ahụ maka ya, a ga-anwale onye ozi na onye njikwa na onye ọka ikpe na ọkwa dị ala. Naanị ihe anyị chọrọ bụ ikpe ziri ezi. ”
Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk, Çetin Yıldırım, ezinụlọ nke ndị nwụrụ anwụ, ndị merụrụ ahụ na ndị ọka iwu bịara ikpe ahụ. Ọkaikpe Can Atalay, onye were okwu mbụ na nge ntị ahụ mgbe njirimara ahụ kwupụtara, kwuru na ụlọ ikpe kpebiri ịjụ ndepụta nke ndị otu maka ihiwe ọkachamara na asambodo nke ọkachamara site na mahadum. N'ụzọ dị otu a, ịchụpụ ọfịs ọhaneze anaghị anabata. Mahadum Nka na Yıldız anabataghị ikike a. Er
Ntị ahụ gara n'ihu na akaebe nke ndị mere mkpesa. Ceyhan Kahveci onye merụrụ ahụ n'ihe mberede ahụ kwuru na ha nwere mkparịta ụka buru ibu tupu ihe mberede ahụ wee sị, Ọkpụkpụ m agbajiela. Ahịhịa ahụ bịara n'ahụ m. M na-eme mkpesa. ”
'Gini mere m jiri gbue akwa m?'
Salih Erbil nwunye ya nwụrụ, ọghọm Salih Erbil, gara nnọkọ ọnụ ya na nwa ha nwanyị Gülgen na Gülşen. Gülgen Erbil kwuru, sị, agara m na nne nne m. Oke mmiri na-ezo, olee otu ihe ọghọm a nwere ike isi mee, nwanne? Onye gburu 25, Uncle Judge? Nna gị nwụrụ n’afọ ndụ gị? Onye ọka ikpe adịghị ọcha, enwere nleghara anya. Ọ bụghị ihe mberede ụgbọ oloko na mmiri ozuzo a. Onye gburu nna m, nwanne nna m? Anya mmiri Gulgen'ın na-aga n'ụlọ nzukọ enweghị ike imeri okwu ndị a.
'Ha kwuru na anyị ga-ajụ nwanne onye ọka ikpe'
Mgbe ọ na-ekwu okwu mgbe nwa ya nwanyị gasịrị, Saliha Erbil gwara ụmụ ya nwanyị na ya nyefere nwanne nna nke ndị ọka ikpe ọbara nna ya ma kwuo na ụmụ agbọghọ ndị ahụ chọkwara ịbịa n'ụlọ ikpe. Agwara m ha na m tụkwasịrị nwanne nna gị ọbara. Childrenmụ m kwuru na anyị ga-arịọ nwanne nna m ikpe onwe anyị. Ha kwuru na anyị ga-abịa naanị anyị. M na-eme mkpesa n'aha ụmụ m. M kwuru, si n'elu na ala, "Ọ sịrị.
Remzi Güvenç kwuru, "ụmụ m nwanyị abụọ na ụmụ ụmụ m abụọ nwụrụ. Ha niile nọ n'okpuru ala. Achọrọ m itinye aka n'okwu ahụ, ana m eme mkpesa ”. Mgbe nke a gasịrị, ụlọ ikpe ahụ kwere ndị ahụ na-esoghị na nkwupụta ikpe a ma chọọ isonye n'okwu ahụ.
'AKW REKWỌ UKWU MAKA ỌRTHAKAR
Turgut Kurt, otu n'ime ndị na-agbachitere, kwuru na akaebe ya na nnọkọ ahụ na onye isi ndị ohi ahụ nọ na mmezi ahụ. N'ịkọwa na ndị injinia na-arụ ọrụ na-eme nchọpụta n'ọhịa, Kurt kwuru, inde Na ọrụ injinia, ndị injinia na-ejikọ anyị na-eme nyocha nyocha. Dabere na ya, etinye aka na ebe a na-efu efu. Ndị injinia ahụghị mkpa ọ dị maka onye nwere mmachi ebe a na-eme ebe ahụ
Onye na-agbachitere Özkan Polat kwuru na mgbe nchọpụta nke injinia jikọtara na ngalaba na-ahụ maka ndozi, e lere anya na ntinye ahụ dị mkpa.
Celalettin Çabuk, onye kwuru na ya esoghị na ọrụ nyocha ọ bụla, kwuru na usoro ndị ahụ karịrị ya na ya esoghị na ọrụ nyocha ahụ.
Anụrụ ntị n’etiti ehihie.
Ebe e si nweta ya: Afọ Ọhụrụ
Mısra Öz, onye nwa ya nwụrụ na Ọdachi Train ọdachi: “Ndị na-elekọta ụbọchị Sọnde ọ bụla maka izu iri na abụọ…
Minista Minista Na-ahụ Maka Ọchịchị Çorlu Praises Culvert
Nwunye 25 Na-agafe Mgbe ọnyá 25 nwụrụ na Corlu Train Disaster
Ezinụlọ nke ndị furu efu ndụ ha na Çorlu Train Disaster Start Action
Nsogbu Train Çorlu enweghị ebe maka ikpe
Misra Oz Sel onye nwa ya nwụrụ na ọdachi ụgbọ oloko na Corlu mepere nyocha abụọ
Case Traorlu Train Disaster Case